Iyo ceramic Apple Watch inoonekwa pakati peguhwa rese | Ndinobva mac
Kunyangwe isu tichitenda kuti pakuvhurwa kwechigadzirwa ichi zvimwe zvakanyanya kushaikwa pane zvingangoita yechipiri chizvarwa AirPods kana iyo AirPower yekuchaja base, runyerekupe nezve izvo zvinogona kuitika zvitsva Nhepfenyuro dzeApple 5 havana kuregeredzwa mazuva ano.
A the zvinopfuura zvinokwanisika kusvika kweECG basa Kune Apple Watch Series 4 uye Series 5 vashandisi mune dzimwe nyika dzakawanda kunze kweUnited States, ikozvino mukana unowedzerwa kuti Apple's smartwatch ichave zvakare iine zvedongo modhi.
Kuita kuti chigadzirwa chive chinodhura zvichibva pane zvimwe zvigadzirwa zvekugadzira zano rakanaka?
Kunyange chiri chokwadi kuti zvinhu zvakaita semakeramiki kana yekutanga Apple Watch yatakaona yakagadzirwa nezvinhu zvakaisvonaka zvakaita segoridhe zvinoita kuti chigadzirwa chikwire mumutengo uye kambani iwane chinzvimbo mukati mematanho emari, hazvisi izvo zvakawanda zvinotengeswa se takaona kare kudaro isuwo hatitende kuti zvine pundutso kutanga kugadzira michina iyi zvakare.
Tinogona kutaura kuti vashoma vanhu vanopedzisira vatenga mawachi aya anowedzera mamwe marudzi ezvigadzirwa zvekugadzira vasina zvimwe zvakanakira kupfuura zvakasiyana zvinhu kunze kwenyika. Ichokwadi ndechekuti isu tingazoshamisika kana Apple ikatangisa Apple Watch nyowani ine zvedongo kana yakafukidzwa negoridhe kesi, asi izvi ndizvo zvinonyeverwa nedzimwe runyerekupe dzakasvika kunetiweki vhiki rapfuura iyi, saka hatisi kuzotonga kunze chero mukana. Izvo zvinoita sezviri pachena ndizvozvo Hatisi kuzoona idzi nyowani Series 5 wachi kusvika mumashure megore rinoSaka dzikama
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo ceramic Apple Watch inoonekwa pakati peguhwa rose
Maitiro ekuudza kuti ndeipi vhezheni ye macOS Mac inomhanya
Yakazorodzwa 16-inch MacBook Pro zvakare yegore rino